चेतन पाण्डे | Nepal Flash
खै के लेख्नु । के नलेख्नु । सबैका अनुहारमा औँसी छाएको छ । सधैँ हाँसी रहने अनुहार पनि निभेका टुकी जस्ता देखिन थालेका छन् । कोही हाँसेका छन् भने पनि देखावटी हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ । यद्यपि मैले,...
जब राज्य अकर्मण्य बन्छ, अकर्तव्यमा लिप्त हुन्छ तब लेख्ने पर्ने कुरा यस्तै हुन्छन् । कहिले काहीँ समय नै यस्तै आउँदो रहेछ । कालो बादलभित्र लुकेको सूर्यलाई बेवास्ता गर्दै लालटिनको धिपधिपे उज्यालोमा जिउन बाध्य हुनु पर्ने । ००० अब कति गर्नु...
ओखती मुलो नभए पनि सलामी दिने गोली त जोहो गरेकै हाेलाउ नि, सरकार !
हिजोआज मन बेचैन छ । सहर बस्ती फेरि एक पटक कोरोनाको आक्रमणले मुर्छित बन्न थालेका छन् । मरिन्छ कि भन्ने त्रास फेरि बढेको छ । जसले नागरिकलाई बचाउने पहिलो कार्य गर्नु पर्थ्यो उहाँ त घुम्ने कुर्सीमा कालो चस्मा लगाएर फनफनती...
खै अरूले के भन्थ्येकुन्नि, मेरोनजरमा तिमी साह्रै हिस्सी परेकी थियौ । अझ त्यो फागु पूर्णिमामा सेता पहिरनमा सजिएर म नजिक आउँदा मेरो मुटुको चाल नै काबु बाहिर गएको थियो । तिम्रा मिठा मुस्कानकफ सहारामासारा ब्रह्माण्डलाई मुठ्ठी मै कस्न सक्छु झैँ...
न हाँस्न सकेँ नत रुनै
मानिसले कतिसम्म सुख थेग्न सक्छ ? कतिसम्म पीडा सहन सक्छ ? आजसम्म विज्ञानले पनि दिन सकेको छैन, यो प्रश्नको सहज जवाफ । अनि कहाँ मेरो सोचको गहिराइ कहाँ त्यति छ र यति गह्रुँगो जवाफ खोतल्न सक्ने । बस्, यति भने...
नायिकाको भेषमा प्रेत
खै के लेख्नु, के पोख्नु जस्तो हुन्छ हरेक लेखाइको सुरुवातमा । तर पनि, बिम्बको यो ५० औँ शृङ्खला बनेछ, नेपालफ्ल्यासमा । जति पोखे पनि कुराका भकारी रित्तिँदैन रहेछ । कति कुरा अझै पनि मनमा छन् । कतिसँग रिस अझै पनि...
समय त बादलका थुम्को झैँ हुँदो रहेछ । अनेकौँ रूप रङ्ग र भाव भङ्गी देखाइ रहने । भ्रम मात्र हुन्छ, बादलको रूप । नजिक पुग्दा थाहा पाइन्छ । झुक्काउँदो रहेछ, मात्र धुवाँका मुस्लोले पनि । पत्तै नपाइ । समय जस्तै...
अन्यौलतामा रुमलिने सोच ! आफैँमा खतरनाक हुन्छ । भ्रमयुक्त हुन्छ । सफलताका मार्गको अवरोध बन्छ । अनि, त्यही अन्यौलतामा रुमलिएका कतिपय बेमेलका सोचहरू एक आपसमा ठोक्किँदा उत्पन्न हुने चट्याङका झट्काले मस्तिष्कलाई समेत निस्तेज बनाइ दिन्छ । म को हुँ ?...
मनाइएन भ्यालेन्टाइन डे यसपालि पनि । जबदेखि तिम्रा आँखाहरू मप्रति कठोर हुन थाले, त्यही बेलादेखि नै मनाउन मन लाग्दैन भ्यालेन्टाइन डे । भन्छन्, मनलाई प्रेमिल बनाउन भ्यालेन्टाइनको दिन कुनै साइत जुराउन पर्दैन रे । त्यो दिन घुँडा टेकेर समर्पणमा झुक्ने...
जुँगै नभएका किम र फेरि जुँगा कालो बन्न थालेका ओली त उस्तै उस्तै पो देखिए
शुक्रवारको दिन । दरबारमार्ग र ठमेल क्षेत्र त्यसै पनि रङ्गिन बन्छ । गएको शुक्रवार त झनै रङ्गिन बन्यो । रातको सट्टा दिन मै । त्यो पनि लाल रङले । मौसमको मिजास पनि रङ्गिन नै थियो । सिरी री री... चिसो...
बेफ्वाँक राज्यका बेफ्वाँक जनता
जिन्दगी नौटङ्की देखाउँछ । बिपनामा मात्रै होइन रहेछ, सपना पनि रुवाउँछ । अनि पागल झैँ हँसाउँछ पनि । धन्य, कुरुक्षेत्रको युद्धमा झैँ मानिसले मानिसको लासको थुप्रो त्यसपछि आजसम्म देख्न परेका छैन । अनि दोस्रो विश्व युद्धमा झैँ मानिसले मानिसको लासको...
देशको राजनीति झैँ लोभी र स्वार्थी, मेरो पत्रकारिता
जुन बेला नेपाल कै इतिहासमा प्रधानमन्त्रीले दोस्रो पटक संसद विघटन गरे । हो, त्यही समय तिरै मेलै पत्रकारितारूपी पेसागत जीवनलाई पहिलो गियरमा ल्याएको थिएँ । पारिवारिक पत्रिका नयाँ समाजमा केही लेख्न सकिन्छ कि भनेर सुरु गरेको मेरो पत्रकारिताले क्यारियर कै...
हरेक वर्ष झैँ यो वर्ष पनि राष्ट्रिय एकता दिवस आयो, गयो । केही मन रमाए, केहीनाक खुम्चिए । मन हुने, देशको माया हुनेले कुनै न कुनै तरिकाले पृथ्वी नारायण शाहलाई सम्झिए ।यो सुन्दर मुलुकको एकिकरणको जग बसाली दिएका पृथ्वी नारायणलाई...
फेरि एक पटक सपना तुहिएका छन् । शायद अर्को सपनाले जन्म लिन्छ नै होला, हिजो अस्ति जस्तै । एउटा मृत्युसँग अर्को जीवनको प्रारम्भ हुनु प्राकृतिक नियम हो । त्यसैले एउटा सपनाको अवसानसँगै अर्को जन्मिनु स्वाभाविकै हो । म र मेरा...
कसरी लाग्दो हो त्यस्ता बाउको माया !
समय उत्ताउलो छ । जिन्दगी झैँ । उन्मादले भरिपूर्ण । अर्थात् म जस्तै । यहाँ औँला बङ्ग्याउन सक्नेले चाहे र खोजेभन्दा बढी पनि पाउँछन् । नसक्ने भुइँमान्छे बनेरै जन्मिन्छन् । अनि मर्छन् पनि त्यसरी नै । समय न हो, मुक्का...
नाङ्गा शासकका भोका रैती
समय पनि अचम्म कै हुँदो रहेछ । यो मुलुकमा ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्था र मेरो स्कुले जीवनले एउटै वर्ष पूर्ण विराम लगायो । त्यो बेला १० कक्षापछि स्कुल जान पर्दैन थियो । मनमा उन्माद पलाए । मिठामिठा सपना मनमा टुसाए...
सोच ! आकार विहीन हुँदो रहेछ । पानी झैँ । बादल झैँ । कहिल्यै भावनाका मिठा तरङ्गमा तैरिने त कहिले कपटका काला बादलसँग रमाउने । अनि स्वार्थीबनेर आफ्नै तालमारमाउने । हावा झैँ । कहिले मिठो सिरेटो बन्ने त, कहिले मुटु...
बिहीबारदेखि नै सुरु भएको छठ पर्वको मुख्य विशेषता मध्ये एक हो, डुब्न लागेको सूर्यको आराधना । हामी नेपालीको अहिलेको बाध्यता पनि यस्तै छ । आफ्नै कारण डुब्न लागेको सूर्यको हामी आराधना गर्दै छौँ । प्रभुहरू हो ! गरिबीले आक्रान्त यो...
ती र यी हठी साँढेका जुधाइ
भगवानले हरेक जीवको आविष्कारसँगै सबैमा समान केही गुण वा दोष दिएका नै छन् । जीवको पनि आविष्कार ! मेसिनको पो हुन्छ आविष्कार ! धेरैको तर्क होला ? आखिर यो ब्रह्माण्डका हरेक वस्तु मेसिन नै त हुन् । सजीव, निर्जीव सबै...
कोरोनाले रापिएको सहर अनि म र मेरो दसैँ
लर्के खसीको पक्कु चपाउँदै, काँक्रोको खल्पी टोकेर जिब्रो ट्वाक्क पड्काउँदा पनि खल्लै लाग्यो, यसपालिको दसैँ । के नपुगेनपुगे जस्तो, के नभएनभए जस्तो । बुढी रिसाएर माइती जाँदा सिरानीमा छटपटाउनेशिरझैँ । प्रेमिकाको वियोगमा निराश हुने मनझैँ । समय नै बेइमान बने...